Xusuusnaw Xasuuqii Ubbo Ugaysatay Shacabka Deegaanka - Cakaara News
Xusuusnaw Xasuuqii Ubbo Ugaysatay Shacabka Deegaanka
Gaashaamo(CN) Axad, 15ka Nov. 2015, Xuska maalinta xasuuqa ubbo ugaysatay shacabka deegaanka ee 5ta bisha Hidhaar ayaa si balaadhan looga xusay dhamaan deegaanka gaar ahaana degmada gaashaamo ee gobolka jarar.
Waxaana kasoo qayb galay munaasabadan mas’uuliyiinta maamulka degmada oo uu horkacayo gudoomiyada degmada mudane yuusuf xasan cali, ururada hooyooyinka, dhalinyarada, odoyaasha, ardayda dugsiga hoyga iyo dhamaan dadkii ay ubbodu waxyeelaysay.
Munaasabadan ayaana lagu cambaaraynayay gabood faladii dilka, dhaawaca, boobka, kufsiga iyo gawraca isugu jiray ee ay ubbo ugaysatay dhamaan shacabwaynaha deegaanka gaar ahaana dhalintii ay agoomeeyeen, hooyooyinkii uurka lahaa ee ay dooxeen, ragoodii na dileen, aabayaashii iyo ugaasyadii, suldaamadii ay hadhkoo cad si naxariis la’aan, damiir la’aan iyo bini aadmanimada kabaxsan ugawraceen.
Hadaba gudoomiyaha degmada gaashaamo mudane yuusuf xasan cali oo munaasabadan kahadlay ayaa sheegay inay maalintan 5ta hidhaar lama ilaawaan katahay dhamaan deegaanka maadaama ay ubbo xasuuq wayn ugaysatay shacabka. Wuxuuna utacsiyeeyay dhamaan eheladii iyo qaraabadii ay dadkooda ubbo laysay isagoo intaa raaciyay inaysan hada kadib gabood faladani kadhici doonin deegaanka oo aan haysano ciidan gaar ah oo runtii mudan in had iyo jeer laxusuuto maadaama ay shacabka deegaanka kadulqaadeen dhibaatadii ubbo ugaysatay oo ay waliba ubbo iyo alqushaashba meel saareen. Wuxuuna hambalyeeyay xukuumada DDSI oo uhoreeyo madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar, golaha kabineega iyo XDSHSI.
Ugudanbayna, Dhamaan dadkii ay waxyeelada ugaysatay ubbo ayaa xaqiijiyay in dhibaatadii ubbo ugaysatay ay maanta kaga bogsadeen waxqabadka xukuumada. Waxayna si gaar ah ugu mahadceliyeen XDSHSI iyo ciidanka gaarka ah ee liyuubooliska.